Orinasa - Jinhua Green Building Industry & Trading Co., Ltd.
Jinhua Green Building Industry & Trading Co., ltd dia fanangonana endrika ivelany, famokarana, varotra, fametrahana amin'ny orinasa iray mitambatra. Orinasa ao amin'ny fandrosoana teknolojia vahiny mandroso sy ny fampifangaroana, tsipika famokarana simenitra GRC, tsipika EPS miorina amin'ny simenitra avo lenta ary tsipika malefaka EPS toy ny tsipika maro, artifact ary vokatra vita amin'ny embossed.
"Raha te-hanao asa tsara, dia tsy maintsy vaoo maranitra ny", mba hihaona amin'ny kalitao avo lenta, avo lenta, fitakiana fahombiazana avo lenta, ny fampandrosoana tsy miankina an'ny orinasa amin'ny fananganana ravaka rindrina ivelany ny tsipika famokarana mandeha ho azy, tsipika famokarana mandeha ho azy mifangaro vovoka maina indrindra, mixer vovoka mandeha ho azy, mixer-tanana, milina fanoratana CNC, milina fanapahana CNC, arc boribory, milina famafana, masinina farany ary vokatra hafa mifandraika amin'izany. Miaraka amin'ny masinina mandritra ny taona maro amin'ny traikefa amin'ny famokarana, ny fitaovana dia mifanaraka amin'ny endrika avo lenta sy ny famokarana, kalitao, avo lenta, mora ampiasaina. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia nanondrana andiana andiam-pamokarana bebe kokoa amin'ireo emiraon'ny Arabo mitambatra, Arabia Saodita, Espana ary firenena hafa. Nanaiky ny mpampiasa, hanome tomban-danja avo lenta.
Tongasoa eto amin'ny orinasa hitsidika sy hitarika!
Inona no azonay atao hanampiana anao?
EPS Products & Mechine
Orinasa ao amin'ny fandrosoana teknolojia vahiny mandroso sy ny fampifangaroana, tsipika famokarana simenitra GRC, tsipika EPS miorina amin'ny simenitra avo lenta ary tsipika malefaka EPS toy ny tsipika maro, artifact ary vokatra vita amin'ny embossed.
Maninona no mifidy ny masininay
● kalitao avo lenta, avo lenta, famokarana mahomby
● Miaraka amin'ny milina busa mandritra ny taona maro niainana ny famokarana
● Avelao ny fandidiana mandeha ho azy sy azo antoka
Automatic Big SPJ150 Batch mialoha ny expander dia mihazakazaka mihazakazaka any Saudi. Manokana ho an'ny hakitroky ambany. Ny masinina dia manana fanitarana voalohany sy Double, efijery mikasika ary fehezin'ny PLC, mora mahatratra 8g / l ...
Ny haingon-trano EPS dia fitaovam-pananganana vaovao ho an'ny haingon-trano ivelany sy ny haingon-trano valindrihana anatiny, izay misy ny rafitra GRC, ravaky marbra, ary koa ny GYPSUM amin'ny haingo anatiny ...
Noho ny virus Corona dia manomboka miasa amin'ny 18 feb 2020 izahay rehefa avy niato nandritra ny fotoana ela. Amin'ny alàlan'ny tranobe Green, tiako ny misaotra ny fanohananao amin'ny taona 2019 sy ny fiahiahianao anay hatrany, Izahay ...
Eps Cornice Famolavolana tsipika famokarana, Masinina Cornice Cornice Eps, Masinina famolavolana endrika Eps Cornice, Eps Cornice koronosy tsipika, Eps sombin-javatra Cornice endrika famolavolana milina, Eps fanaovana koronosy Cornice,